ကားအရောင်းအ ၀ ယ်ကားရပ်နားရန်နေရာကျယ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်ခတ်အတားအဆီးဂိတ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
tripod turnstile ယန္တရား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Dia ။ 133mm * အထူ 3mm * 600 (H) Block bollards  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 3.78 / Piece/Pieces
N95 Corona ဗိုင်းရပ်စ်အတွက် KN95 Face Mask ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်း: ရောင်းရန်ယူနစ် - တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းတစ်ခုတည်း အထုပ်အရွယ်အစား: 6X12X0.5 စင်တီမီတာ လူပျိုစုစုပေါင်းအလေးချိန်: 0,008 ကီလိုဂရမ် ကြာမြင့်ချိန်...
အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပုံရိပ် (မော်ဒယ် # ITI-980Y) ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် ITI-980Y အနီအောက်ရောင်ခြည်ကင်မရာထုတ်ကုန်သည် 2019-nCoV Wuhan coronavirus ရောဂါအသစ်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တိုင်းတာမှုတိကျမှုသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အကွာအဝေး၏ ၃၅ မှ ၄၂ ºCအတွင်း± ၀.၅ ±Cအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါစနစ် 37.3...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 78 - 98 / Bag/Bags
min ။ အမိန့်:2Bag/Bags
အဆက်အသွယ်မရှိသောအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူမီတာ အသွင်အပြင်: ၁.၂ စက္ကန့်တိုင်းတာခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်အချက်အလက်၏ 2,32 အစုံ; 3.Large မျက်နှာပြင်သုံးအရောင်နောက်ခံအလင်း; 4, Offset, Fahrenheit ချိန်ညှိသည် 5. လုံခြုံစိတ်ချရပြီးလက်တွေ့ကျသော၊ 6. အပူချိန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းကိုကလစ်တစ်ချက်တည်းပြောင်းခြင်း၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမျက်နှာဖုံး (Model # MSM-01) ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ Face mask 3Ply Coronavirus တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမှုမျက်နှာဖုံးသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆေးရုံအတွက်အရည်အသွေးကောင်းသည်...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 120000 / Bag/Bags
ကားအရောင်းအ ၀ ယ်ကားရပ်နားရန်နေရာကျယ်
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 320 / Piece/Pieces
ထုပ်ပိုး: စက္ကူပုံး, သစ်သားအိတ်။
Supply နိုင်ခြင်း: 2000pcs per month
ကားရပ်ရန်ဂိတ်တံခါး (မော်ဒယ် # STD115) နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameters: အရွယ်အစား ဖွဲ့စည်းပုံ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 29 / Bag/Bags
အကာအကွယ်ဝတ်စုံကိုရေစိုခံဘေးကင်းလုံခြုံရေး coverall ။ အဓိကပစ္စည်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှာ PP မဟုတ်သောအထည် (၃၇ gsm) + PE film (28gsm) သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရ zips, Velcro, အပြာရောင်အစင်းများ၊ elastics ETC စသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်း: ၁။ ချုပ်ထားသောချုပ်ရိုးချုပ်သည်အရည်ခံနိုင်စွမ်းကိုထိန်းသိမ်းသည်...
ခတ် Turnstile (ပုံစံ # STD006) မိတ်ဆက် Flap turnstile တွင်စံသတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စစ် interface ကိုတပ်ဆင်ထားပြီး ID ကတ်များ၊ အိုင်ဒီကတ်များ၊ သံလိုက်ကဒ်များ၊ ဘားကုဒ်များစသည်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ parameter များ: ၁ ။ ပါဝါထောက်ပံ့ရေး: AC220V ± 10V, 50Hz / AC110V ± 10V, 60Hz ၂ ။ ပါဝါစားသုံးမှု: 100W / 24V ၃ ။ အပူချိန်:...
tripod turnstile ယန္တရား
ဒေါင်လိုက် tripod Turnstile (ပုံစံ # STB201 ) parameter များ: ၁ ။ ပါဝါထောက်ပံ့ရေး: AC220V ± 10V, 50Hz / AC110V ± 10V, 60Hz ၂ ။ ပါဝါစားသုံးမှု: 100W ၃ ။ အပူချိန်: -15 မှ 60 ဒီဂရီ ၄ ။ စိုထိုင်းဆ: <95%, ကွန်ကရစ်မပါဘဲ ၅ ။ ကျမ်းပိုဒ်အကျယ်: 600mm ၆ ။ Passing Speed ​​- ၃၀ ယောက် / မိနစ် (ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်)၊ ၂၀ ယောက် / မိနစ်...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 12.5 / Bag/Bags
ထုတ်ကုန်အမည်: တစ်ခါသုံး antibacterial ပိုးသန့်ဆေးမှုန်ရေမွှား အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: 100ml သက်တမ်း - ၂၄ လ အရက်ပါဝင်မှု - ၇၅% အသုံးပြုခြင်း - အရေပြားနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဘက်တီးရီးယားများကိုသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက် - ပြင်ပပိုးမွှားရန်အတွက်အရေပြားပေါ်ရှိမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့လေပေါ်မှာပန်ပါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 1380 / Piece/Pieces
ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းနှင့်ပိုးသန့်ဆေးစက် ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း Post disinfection machine တွင်တိကျမှုမြင့်မားသောအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာကိုအသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်မြင့်မားသော resolution တို့ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နေရောင်ခြည်ကိုထိခိုက်မှုမရှိခြင်း၊...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 860 / Set/Sets
ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်လမ်းလျှောက် - မှတဆင့်သတ္တု detector (မော်ဒယ် # BT-01) channel ကိုအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းတံခါးသည်တိကျပြီးအဆင်ပြေသောအပူချိန်တိုင်းတာခြင်းကိရိယာဖြစ်သည်။ တံခါးရှေ့မှာရပ်နေစဉ်သင်၏နဖူးကိုအပူချိန်တိုင်းတာခြင်းနေရာမှ ၁-၂ စက္ကန့်တွင် ဦး တည်ပြီးအပူချိန်တိုင်းတာသည့်တံခါးသည်ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 0.5 / Piece/Pieces
အသစ် Novel Corona Virus အတွက်မျက်နှာဖုံး လုပ်ဆောင်ချက်များ - မှုန်အမှုန့်မျက်နှာဖုံးများမှထိရောက်စွာကာကွယ်မှု ဘက်တီးရီးယား / ဖုန် / ဝတ်မှုန် / ဖုန် / PM2.5 အင်္ဂါရပ်များ: ပလပ်စတစ်နှာခေါင်းကလစ် Ultrasonic ချောမွေ့စွာ blank သုံးလွှာခေါက်ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း...
Dia ။ 133mm * အထူ 3mm * 600 (H) Block bollards
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 88 / Piece/Pieces
Bollards ပိတ်ဆို့ (မော်ဒယ် # TD-TAA219) နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameters: 1.System ထိန်းချုပ်မှု: Electro- ဟိုက်ဒရောလစ် 2. ပါဝါထောက်ပံ့ရေး: 220V 3. စနစ်ပါဝါ (w): 300W ထသောအခါ - 4. 3-5S 5. Fall အချိန်: 3-4S 6. အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -45 ° C-75 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ဖိအား B100000kg 7.Bearing ၈။ သတိပေးနည်းစနစ် -...
TX-850 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မြင့်မားသော sensitivity gold metal detector ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ TX-850 gold king detector သည်ရွှေရှာဖွေသောသတ္တုရှာဖွေစက်များကြားတွင်ထူးခြားသည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သောရွှေ nuggets နှင့်မြင့်မားသောရတနာရှာဖွေရေးစက်အဖြစ်၎င်း၏စွယ်စုံသောလုပ်ဆောင်မှုကိုပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။...
2019 မြေအောက်သတ္တု ရှာဖွေရေး အတွက် အကောင်းဆုံးရွှေ သတ္တုရှာဖွေစက် (မော်ဒယ် # MD-5031) ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ဤ MD-503 1 Underground Gold Metal Detector သည် လက်ဖြင့်ကိုင်ထားသော သတ္တုရှာဖွေစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ferrous နှင့် ferrous metal တို့အားခွဲခြားနိုင်သည်။ ဤသတ္တုရှာဖွေစက်သည် ၀ ါသနာပါ ၀...
G အဟောင်းရှာဖွေစက်, အရည်အသွေးကောင်းနှင့်စျေးပေါစျေးနှုန်း (မော်ဒယ် # MD-5021) ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ MD-5021 သတ္တုရှာဖွေစက်သည်အလေးချိန်ရှိသောစက် ၀ ယ်စက်ကိုရှာဖွေနေသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏သတ္တုရှာဖွေစက်ဖြင့်သင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုဒင်္ဂါးများ၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်း၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ ရွှေနှင့်ငွေများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။...
2019 ရွှေသတ္တုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်အကောင်းဆုံးသတ္တုရှာဖွေစက် (မော်ဒယ် # MD-3028) ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ MD-3028 LCD Display မြေအောက်သတ္တုရှာဖွေစက်သည်လွယ်ကူသောစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တိကျသောတိကျမှုနှင့်လျင်မြန်သောတုန့်ပြန်မှုအသွင်အပြင်များကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည် LCD...
ရွှေသတ္တုရှာဖွေစက် (မော်ဒယ် # MD-810) မြေပြင်ရှာဖွေရေးသတ္တုရှာဖွေစက်၊ ဈေးနည်းသောအကွာအဝေးရှိသတ္တုရှာဖွေစက်...